Archive du 20200713
F’angaha tsy voafehy ? Mbola hitombo ny isa, hoy ny Filoha
Miara-miory amin’ny fianakaviana rehetra namoy ny havana. Nisy loholona, nisy solombavambahoaka, ny lefitry ny solontena maharitry ny UNICEF, dokotera niara-niasa tamin’ny OMS,
Coronavirus 684 voa tao anatin’ny roa andro
Niampy iray ny olona matin’ny valanaretina coronavirus tao anatin’ny 48 ora, ka ny Pasitora Rakotonirina David Filohan’ny FFKM io namoy ny ainy io. 35 ny fitambaran’ireo nodimandry hatramin’izay.
CTC Village Voara Tsy tokony hitondra zazakely ny olona mankeny
Misy amin’ireo olona mahatsapa tsy fahasalamana tonga manatona eny amin’ny
Polisim-pirenena “Tsy izahay no tokony atahorana fa ilay aretina”
Aza atao any am-paosy ny arotava ka rehefa mahita Polisy vao hapetaka haingana, hoy ny hafatry ny avy eo anivon’ny polisim-pirenena manoloana ny fihetsik’ireo olom-pirenena miatrika izao COVID 19 izao.
Fiarahamonina Mbola misy mihevitra ihany fa angano ny Covid 19
Misy ireo mihevitra fa aretin’ny mpanankarena ity Coronavirus ity, hoy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ,